लगातार मोबाइलमा गेम खेल्नुहुन्छ ? : चीनमा २१ वर्षीया युवती बनिन् अन्धो – MeroJilla.com
लगातार मोबाइलमा गेम खेल्नुहुन्छ ? : चीनमा २१ वर्षीया युवती बनिन् अन्धो
बेइजिङ , २६ असोज ।
झण्डै लगातार आफ्नो स्मार्टफोनमा गेम खेलेपछि चीनकी एक २१ वर्षीया युवती अन्धो बनेकी छिन् ।
चीनको डोङगुआनकी ती युवतीको दाहिने आँखामा रेटिनल आर्टरी अब्सट्रक्सन भएको डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
वु नाम गरेकी ती युवतीले गत अक्टोबर १ मा आफ्नो प्रिय खेल ‘किङ अफ ग्लोरी’ खेल्दै गर्दा आफ्नो दाहिने आँखाबाट देख्न छाडेको थाहा पाएकी थिइन् ।
शुरुमा आँखा थाकेर यस्तो भएको भन्ने ठानेर उनी सुत्न गएकी थिइन् । तर, भोलि बिहान उठ्दासमेत उनको दाहिने आँखाको स्थिति सुधार भएन ।
त्यसपछि उनलाई आमाबाबुले तत्कालै अस्पताल लगेका थिए । त्यहाँ डाकटरहरुले उनलाई निकै जटिल मानिने रेटिनल आर्टरी अब्सट्रक्सन भएको बताएका थिए ।
यस्तो विशेष गरेर धेरै उमेर भएका बिरामीहरुमा देखिने गरिए पनि स्मार्टफोनको सानो स्क्रिनमा गहिरिए लगातार हेरिरहँदा वुको आँखा निकै थोकेको डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
वुले समेत आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै यसरी लामो समय मोबाइलमा आफूले बिताउन नहुने बताएकी छिन् । सामान्यतय उनी आफ्नो कामबाट फर्केर दिनको ७ देखि आठ घण्टा गेम खेल्ने गर्थिन् ।
उनी कार्यालयमा फाइनान्समा काम गर्ने भएकीले दिनभर पनि कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेर्न बाध्य हुन्थिन् । यसले उनको आँखामा थप दबाब पथ्र्यो ।
अझ छुट्टी हुँदा त उनी दिनभर गेममा नै व्यस्त हुन्थिन् । मात्र केही घण्टाका लागि मात्र सुत्थिन् ।
चिनियाँ मिडियाका अनुसार छुट्टीमा साथीहरुसँग बाहिर घुम्न जान छाडेर उनी घरमा गेम खेल्न बस्थिन् । उनको आँखाले त्यस्तो दबाब सहन नसकेर एउटा आँखा अन्धो नै हुन पुग्यो ।
वु अझै पनि अस्पतालमा नै छिन् । डाक्टरहरु उनको उपचारमा कुनै उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताइएको छ ।
वुको कथा चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि डाक्टरहरुले लगातार ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म मात्र कम्प्युटर वा स्मार्टफोनमा हेर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसबीचमा केही मिनेटलाई अन्य ठाउँमा हेरेर आँखालाई आराम दिने वा ब्रेक लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ